Lixa Shaggar, Jibaat: Addatti guyyaa har’aa Qeerroon Jibaat miseensa hoggana ABO jaal Gadaa Gabbisaa waliin marii geggeessan. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLixa Shaggar, Jibaat: Addatti guyyaa har’aa Qeerroon Jibaat miseensa hoggana ABO jaal Gadaa Gabbisaa waliin marii geggeessan.
OROMOO KANA ARGI!
Dargaggoo Nimona Chali, Kan Suura jalqabaa irratti Argamu qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti gatii hin madaalamne kanfalee,Summii diinni qaama isaa keessa awwaaleen dararamaa jira. Mana hidhaa ma’akalawii qofatti marroo 3 kan hidhamee fi manneen hidhaa biyya kanaa,Waajjira tikaa fi kampii waraana garagaraa keessatti Reebamuu,fannifamuu haga Summii nyaachifamuu qaqqabeera. Summiin yeroo gara yerootti nyaachisanii fi waraanan qaama isaa keessa turuudhaan kulkulee amma sadarkaa yaddessarra gahee jira. Sammuu isaatti ol bahuudhan dhiitessee,qaama gama tokkoo gara naaffessuufi Laamshessuutti deemaa jira.Nimoonaan Qabsoo barattoota #Amboo, Harka wayyaa jalaan qabsoo Hidhannoo Oromoo utubuu, Mormii Mastarpilanii irratti qooda Olaanaa bahachuu fi haga har’aattuu Falma Bilisummaa Oromoon taasisu waliin dhaabachuun beekama.
Suura lammataa irratti kan argamu JAARRAA HAWAAS BORUU(#Abbaa_Gadaa)’nis Rakkoo Wal fakkaatuuf Saaxilameera. Kan nama ajaa’ibu, Jarri lameenuu Waggaa Sadi Dura Wal faana Waajjira Tikaatti reebamaa fi Fannifamaa turan. Qorichi Wal fakkaataan akka kennameef kan agarsiisus Dhibeen isaanii yeroo wal fakkaatatti Dhohuu isaati. 2004 GC irraa kaasee Fantaalle tti Warraaqsa QBO bal’aa barattootaf Uummata kakaasun qabsaayaa ture. Baruma kanarraa Jaarmiyaa ABO ijaaree hoogganaa kan ture yoo ta’u hanga har’aatti dammaqiinsa siyaasaa inni uumen uummanni Fantaallee(karrayyuu)n diinni hin gowwoomsine. Jaarmiyaan bal’aan har’a ABOn achii qabu ijaarsa isaati, isumatu hoogganaa jiras.
January 06 2006 GC irraa kaasee miseensota jaarmiyaa Biiluu Calanqoo nama 6 waliin Waraana Bilisummaa Oromoo WBOtti makame. Baha oromiyaa G/Harargee dhihaa Naannawa mi’eessoo Kurfaa gurraattii, Kurfaa saawaa, Gulube, Doobbaa, biyyoo karaabaa, Gaara nyaataa, Saaphalo fi Naannawa Boroodaa keessatti qabsaa’ota sabaa kanneen akka Aadam Diimaa faa wajjiin Qabsoo hidhannoo fi ijaarsa siyaasaa bal’aa geggeessaa turee, booda jaallan isaa wajjiin gara Zoonii kibbaatti darbuun mooraa leenjii seenee Ogummaa WBO tin baye. WBOzoonii kibbaa keessatti dirqama loltummaa kaasee sadarkaalee hedduu keessa kan darbe, Humna addaa WBO(jajjabee) Zoonii kibbaa keessatti qooda guddaa bahaa turee, biyya Keeniyaa Nairobi tti rakkoo yerootin tokkummaa oromoota achi jiraatani kan diigame deebisee ijaarudhaan Waldaa Dargaggoota Oromoo East Africa hundeessee hoogganaa ture. Bobbaa gara biyyaa 20013 jaallan isaa waliin bobba’een jaarmiyaa ABOguddicha Biiluu Calanqoo haaromsuudhan zoonii WBO hundeessudhaan hoogganaa turee jira.
Bara 29/08/2008 EC tti Dhukkubsatee yaalaf osoo deemaa jiruu diinni hordofaa ture butuun ukkaamsanii Mana hidhaa xoorhayloochi tti dhokfame.
IJOOLLEEN KUN BIRMANNAA BARBAADU. OROMOON NAMA ISAAF JECHA BALAA AKKANAAF SAAXILAMEF BIRMACHUU QABA.